Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba Eziphambili zaseHawaii » Abakhenkethi baya eHawaii: Sifuna ukubona ngaphantsi kuni
Iphuhliswe ngabahlali base-Oahu, ngokubambisana neSixeko kunye ne-County of Honolulu kunye ne-Oahu Visitors Bureau (OVB), i-Oahu Destination Management Action Plan (DMAP) ichonga iindawo ezinesidingo kunye nezisombululo zokuphucula umgangatho wabahlali. ubomi kunye nokuphucula amava endwendwe. Into yokuqala ekwisicwangciso kukunciphisa inani elipheleleyo labatyeleli. Ukhenketho ngumqhubi woqoqosho olukhulu eHawaii kwaye lusasazeka ngaphezulu kwamanye amashishini anjengeenkonzo, ezothutho kunye nokuthengisa.
Impendulo yoluntu yaqokelelwa ngexesha lokuboniswa kokubini kunye nefom yokufaka kwi-Intanethi.
Igunya lezoKhenketho laseHawaii (HTA) lipapashe i-2021-2024 DMAP, isikhokelo sokwakha ngokutsha, ukucacisa kwakhona nokuseta kwakhona umkhombandlela wezokhenketho e-Oahu.
Isicwangciso esisekwe eluntwini siyinxalenye yomsebenzi we-HTA ngokubhekisele kwi-Malama Kuu Home (ukukhathalela ikhaya lam endilithandayo) kunye neenzame zayo ezikhawulezileyo zokulawula ukhenketho ngendlela yokuzihlaziya.
"Siyababulela abahlali base-Oahu abathathe inxaxheba kwinkqubo ye-DMAP kwaye banomdla wokubonelela ngeembono zabo ezahlukeneyo, baxoxa ngemiceli mngeni eyahlukeneyo enxulumene nokhenketho kwiindawo abahlala kuzo kwaye bancedisa ukumisela isicwangciso esisebenzayo nesifunekayo kwimpilo yoluntu," utshilo uJohn De Fries , Umongameli we-HTA kunye ne-CEO. "Imalunga nokuqhubeka kokusebenzisana kunye nokuqhubela phambili kunye kwi-malama le ndawo ixabisekileyo kunye nenye, njengoko kufunwa ngabantu base-Oahu."
I-DMAP igxile kumanyathelo aphambili abahlali abawabona eyimfuneko kwisithuba seminyaka emithathu. Isiseko se-Oahu DMAP sisekwe Isicwangciso-qhinga se-HTA 2020-2025, kwaye iintshukumo zisekwe kwiintsika ezine zokunxibelelana -Izixhobo zendalo, iNkcubeko yaseHawaii, uLuntu kunye neNtengiso yeNtengiso.
"I-Oahu yindawo ekhethekileyo kwaye ime ngaphandle kwayo yonke indawo emhlabeni ngenxa yobuhle bayo bendalo kunye nabantu bayo ababalaseleyo. Ngokusebenza kunye siluluntu ukukhathalela izixhobo zethu, sidala imeko apho inkcubeko yethu, umhlaba wethu namanzi, uqoqosho lwethu, kunye nobudlelwane bethu bunokuphumelela, utshilo uSodolophu uRick Blangiardi.
Uqhubeke wathi, "Ngokusebenza noGunyaziwe wezoKhenketho eHawaii kwi-Oahu's ye-Destination Management Plan yesiCwangciso, isiXeko kunye ne-County yase-Honolulu siza kugxila kwizinto ezintathu eziphambili ezisekwe eluntwini: Khusela ezona ndawo zethu zidumileyo kwaye ulawule amava kuye wonke umntu obandwendwelayo, ukunciphisa umda -ukuze kuqeshwe kwiindawo ezinemihlaba, kwaye kwandiswe ukusetyenziswa kweendlela zothutho ezinxulumene nezotyelelo. ”
La manyathelo alandelayo aphuhliswa yikomiti elawulayo yase-Oahu, ebandakanya abahlali abamele uluntu abahlala kulo, kunye ishishini leendwendwe, amacandelo ohlukeneyo eshishini, kunye nemibutho engenzi nzuzo, enegalelo eluntwini. Abameli abavela kwiSixeko nakwiNqila yase-Honolulu, i-HTA kunye ne-OVB bakwabonelela ngegalelo kuyo yonke inkqubo.
Ukunciphisa inani elipheleleyo leendwendwe e-Oahu ukuya kwinqanaba elilawulekayo ngokulawula inani leendawo zokuhlala zabakhenkethi kunye nokuphononongwa kotshintsho kusetyenziso lomhlaba, ukucandwa komhlaba kunye nemigaqo-nkqubo yesikhululo seenqwelomoya.
Ukumilisela inkqubo yangaphambi nasemva kokufika kwezonxibelelwano ukukhuthaza indlela yokuziphatha enentlonipho nenkxaso.
Chonga iisayithi kwaye uzalisekise izicwangciso zobugosa kwiindawo eziphambili zeOahu.
Yandisa ukunyanzeliswa kunye nolawulo olusebenzayo lweendawo kunye neendlela.
Phuhlisa inkqubo yokubek'esweni yokubeka esweni nokulawula abasebenzisi kumthombo wendalo nakwiindawo zenkcubeko.
Sungula i "Reererative Tourism Fee" exhasa ngokuthe ngqo iinkqubo zokuvuselela izixhobo zaseHawaii, ukukhusela izibonelelo zendalo kunye nokujongana namatyala olondolozo angaxhaswanga.
Ukuphuhlisa nokumilisela iinkqubo zentengiso ukutsala umdla wabakhenkethi abathi babeka phambili imeko-bume, inkcubeko kunye notyalo mali kuluntu lwethu.
Qhubeka ukuphuhlisa kunye nokuphumeza iinkqubo "Thenga zaseKhaya" ukukhuthaza ukuthengwa kweemveliso zalapha kunye neenkonzo zokugcina imali kuluntu lwethu kunye nokunciphisa ikhabhoni.
Lawula ukusetyenziswa kweendwendwe njengezithuthi e-Oahu.
Sebenza namahlakani asekuhlaleni ukuphuhlisa, ukuthengisa, ukukhuthaza, kunye nokuxhasa ukusebenzisana ngakumbi, amava aphuculweyo atyebisa abahlali kunye neendwendwe ngokufanayo.
Oktobha 21, 2021 kwi-01: 36
umfanekiso weskrini شات عراقنا دردشة عراقية شات بغداديات شات عراقيات